Home » Critic » မောင် Census
Year New Member
နံပါတ်စဉ် အမည် ပထမဆုံးပို့စ် လက်ရှိတင်ပို့စ် ရွာသက်တန်း(ရက်) စုစုပေါင်းပို့စ်
1 Kai 11/09/08 18/08/15 2533 782
2 Kyaemon 26/12/09 09/05/15 1961 625
3 ကိုပေါက် (မန္တလေး) 19/04/10 09/05/15 1948 1442
4 Manawphyulay 07/05/10 18/08/15 1930 927
5 အာဂ 17/01/10 11/04/15 1911 175
6 ကြောင်ကြီး 14/08/10 18/08/15 1831 539
7 သော်ဇင်(လွိုင်ကော်) 05/05/10 21/04/15 1813 191
8 Naywoon ni 25/09/10 18/08/15 1789 419
9 Ma Ma 18/11/10 18/08/15 1735 136
10 Etone 08/05/10 07/01/15 1706 849
11 Wei Wei 21/10/10 09/06/15 1693 364
12 Who Who 28/09/10 18/04/15 1664 95
13 Padonmar 03/02/11 18/08/15 1658 198
14 Mr. MarGa 12/10/10 20/04/15 1652 81
15 လုံမလေး မွန်မွန် 09/01/11 15/07/15 1649 144
16 ဖြူစိုင်းလူ 28/02/11 16/07/15 1600 162
17 Char Too 10/09/10 23/12/14 1566 50
18 Hmee 17/03/11 28/06/15 1565 79
19 Nature 05/04/11 11/07/15 1559 52
20 အလင်းဆက် 24/05/11 18/08/15 1548 541
21 Nozomi 16/02/11 01/05/15 1536 63
22 Moon Poem 22/03/11 21/05/15 1522 154
23 မောင်ဘလှိုင် 30/04/11 26/06/15 1519 115
24 Foreign Resident 25/04/11 10/06/15 1508 192
25 မဟာရာဇာအံစာတုံး 11/06/11 22/07/15 1503 306
26 Myanmar Web Designer 26/04/11 13/05/15 1479 35
27 Black Chaw 03/09/11 18/08/15 1446 301
28 Shwe Ei 05/09/11 08/08/15 1434 40
29 နွေဦး 18/06/11 21/05/15 1434 88
30 အင်ဇာဂီ 15/09/11 18/08/15 1434 494
31 အရီးခင်လတ် 30/09/11 18/08/15 1419 193
32 Surmi 25/08/11 28/06/15 1404 94
33 Htet Way 27/10/11 08/08/15 1382 131
34 စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် 02/09/11 05/06/15 1373 140
35 Aye KK 20/11/11 18/08/15 1368 205
36 မှော်ဆရာ 25/10/10 28/06/14 1343 58
37 ကြောင်ဝတုတ် 06/10/11 04/06/15 1338 102
38 ရွှေတိုက်စိုး 22/02/11 10/10/14 1327 78
39 တောတွင်းပျော် 31/12/11 18/08/15 1327 23
40 KyeeMite 17/01/12 18/08/15 1310 89
41 Kotun Winlat 05/12/11 24/06/15 1298 115
42 Swal Taw Ywet 11/01/12 27/07/15 1294 57
43 မိုက်ကယ်ဂျော်နီ အောင်ပု 09/10/10 28/03/14 1267 87
44 Zaw Min 18/02/12 05/08/15 1265 58
45 ကူမားရ် 01/11/10 14/04/14 1261 10
46 Wow 20/11/11 03/05/15 1261 57
47 ကထူးဆန်း 13/09/11 23/02/15 1260 104
48 Ko Out of 16/02/12 20/07/15 1251 87
49 ခေတ်သစ်ပေါက်ကျိုင်း 12/01/11 26/05/14 1231 92
50 Kaung Kin Pyar 14/03/12 21/07/15 1225 38
51 Pooch 26/05/11 24/09/14 1218 27
52 Ma Ei 08/03/12 11/06/15 1191 52
53 Pan Pan 30/09/10 13/12/13 1171 61
54 Novy 12/12/11 23/02/15 1170 63
55 Yin Nyein Nway 15/07/10 13/09/13 1157 357
56 ဝင့်ပြုံးမြင့် 02/07/12 18/08/15 1143 45
57 Ye Yint Hlaing 04/06/12 17/07/15 1139 30
58 ခင် ခ 18/05/12 26/06/15 1135 446
59 ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် 11/07/12 12/08/15 1128 78
60 ဦးကျောက်ခဲ 21/07/12 18/08/15 1124 45
61 ဦးဂျစ် 21/12/10 14/01/14 1121 39
62 စိန်ပေါက်ပေါက် 26/09/10 17/10/13 1118 146
63 ဦးပါလေရာ 04/06/11 24/06/14 1117 70
64 ရွှေအိမ်စည် 04/07/11 18/07/14 1111 115
65 ရွှေညာသား 14/09/11 26/09/14 1109 10
66 ရွာသူလေးချမ်းချမ်း 16/09/10 24/09/13 1105 27
67 ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ 28/01/12 03/02/15 1103 71
68 အောင်မိုးသူ 20/08/12 18/08/15 1094 139
69 Maung 12/08/11 26/07/14 1080 19
70 ကျော်စွာခေါင် 15/06/12 16/05/15 1066 75
71 ကာရံ 03/10/12 18/08/15 1050 186
72 Come Way 09/10/11 22/08/14 1049 57
73 ဆူး 10/07/10 15/05/13 1041 398
74 ဇီဇီခင်ဇော် 16/10/12 18/08/15 1037 255
75 Rose Minn 18/01/11 12/11/13 1030 8
76 ဦးသု 30/03/12 12/01/15 1019 58
77 သူရသာဝါ 29/04/10 08/02/13 1017 157
78 နွယ်ပင် 09/09/10 18/06/13 1014 243
79 Sorrow 13/05/12 15/02/15 1009 33
80 Mလုလင် 13/12/11 12/09/14 1005 50
81 ကျောက်စိမ်း တိန်ညင် 17/12/11 14/09/14 1003 66
82 TNA 20/01/12 14/10/14 999 109
83 Asiamasters 17/10/10 02/07/13 990 78
84 Thuyazaw 19/12/11 03/09/14 990 38
85 Courage 17/11/12 30/07/15 986 38
86 Ko Chogyi 08/07/12 19/03/15 985 32
87 ဘဲဥ 10/01/12 15/09/14 980 82
88 တိမ်မည်း 06/09/12 13/05/15 980 28
89 သားပု 19/05/10 14/01/13 972 46
90 Uncle Gyi 27/09/12 10/05/15 956 13
91 သုရှင် 06/06/12 16/01/15 955 42
92 တောင်ပေါ်သား 22/01/13 18/08/15 939 193
93 Chityimhtoo 12/08/11 02/03/14 934 77
94 တညင်သား 12/03/11 29/09/13 933 13
95 maung moe nyo 03/06/10 20/11/12 902 57
96 သျှားသက်မာန် 23/07/12 10/01/15 902 25
97 နီဂီမိ 15/01/11 01/07/13 899 107
98 PareByoke 20/02/10 02/08/12 895 256
99 မောင်ပေ 26/04/11 01/10/13 890 396
100 ပန်းစံပယ် 28/09/12 01/03/15 885 8
101 We R One 10/06/11 06/11/13 881 65
102 bigchef 11/12/10 06/05/13 878 20
103 TTNU 23/08/11 08/01/14 870 88
104 Nicolus Argal 20/06/12 05/11/14 869 58
105 နန်းတော်ရာသူ 10/11/12 25/03/15 866 51
106 ဗုံဗုံ 01/12/12 03/04/15 854 11
107 Johnnydeer 06/12/12 27/03/15 842 76
108 Fatty 13/07/10 26/09/12 807 351
109 King 03/05/11 16/07/13 806 59
110 ဆုမြတ်မိုး 11/12/12 24/02/15 806 18
111 ရာမည 27/02/13 12/05/15 805 35
112 ဘုန်းကျော် 19/09/11 26/11/13 800 157
113 ရွှေကြည် 07/07/12 14/09/14 800 32
114 Don Juan Ronald 25/09/11 30/11/13 798 23
115 AKKO 13/05/10 02/07/12 782 50
116 Kyi Lwin 01/03/12 11/04/14 772 50
117 မိုးမင်းသား 18/02/12 05/03/14 747 48
118 လင်းဝေ 26/05/10 07/06/12 744 154
119 Conny Kim 06/08/13 11/08/15 736 20
120 kokothndar 20/07/11 19/07/13 731 33
121 San Hla Gyi 22/03/12 16/03/14 725 21
122 TheWinner GetPrize 12/07/12 29/06/14 718 11
123 DEPARKO 30/01/12 26/12/13 697 77
124 Amatmin 20/10/11 01/09/13 683 27
125 စေပိုင်ထွဋ် 03/02/12 16/12/13 683 62
126 A Mar Nyo 15/08/13 28/05/15 652 3
127 Pazflor 25/02/12 04/12/13 649 8
128 Wai Aung 30/01/12 22/10/13 632 53
129 Zaw Thant 11/07/13 11/03/15 609 9
130 ရွှေမိုးတိမ် 10/09/13 07/05/15 605 18
131 Myanmar Oscar 21/09/12 16/04/14 573 10
132 Iris 26/01/13 28/07/14 549 10
133 Awra Cho 26/01/12 16/07/13 538 9
134 မင်းခန့်ကျော် 08/04/13 18/09/14 529 80
135 Black Lover 22/10/10 20/03/12 516 11
136 ကိုစစ် Ko Six 14/01/14 12/06/15 515 54
137 ဇေယျာစံ 29/11/13 21/04/15 509 5
138 ကျော်ဘသစ် 05/11/12 13/03/14 494 19
139 Khaing Khaing 14/02/12 19/06/13 492 38
140 Student 10/02/11 06/06/12 483 21
141 ရင်နင့်အောင် 03/02/12 27/05/13 480 57
142 အရိပ်စစ် 28/10/12 17/02/14 478 23
143 မိုချို 14/03/12 20/06/13 464 41
144 lu lu 10/04/14 05/07/15 452 23
145 Thit Min 19/09/11 05/12/12 444 94
146 Green Rose 20/01/12 12/03/13 418 10
147 မီမီ 27/01/14 14/03/15 412 11
148 သန်းထွဋ်ဦး 10/08/11 04/09/12 392 139
149 mandalarthu 27/03/11 17/04/12 388 39
150 May July 27/04/12 11/05/13 380 8
151 ငှက်ကြီး 03/01/11 11/01/12 374 137
152 Kanjosan 24/06/11 29/06/12 372 30
153 လူကလေး 17/01/13 13/01/14 362 16
154 captainamerica 09/05/11 24/04/12 352 11
155 Candle 18/09/12 02/09/13 350 11
156 ဂျက်စပဲရိုး 26/06/14 06/06/15 346 11
157 မနှင်းဖြူမှန်မှန်ပြော 07/01/13 28/11/13 326 32
158 water-melon 01/09/11 18/07/12 322 29
159 Davit 27/04/12 06/03/13 314 19
160 eros 31/08/10 04/07/11 308 45
161 ဇောက် ထိုး 23/04/12 17/02/13 301 44
162 Paing Lay 03/12/13 28/09/14 300 20
163 ပိုင်လေး 29/12/11 12/10/12 289 60
164 No Non Negative 21/03/13 31/12/13 286 12
165 Mr. WorldWide 29/01/13 05/11/13 281 99
166 ခရီးသည်ကြီး 17/05/13 20/02/14 280 12
167 မောင်မိုဘိုင်း 22/09/12 21/06/13 273 39
168 အရိယသစ္စာ 30/12/11 26/09/12 272 12
169 Ba Gyi 01/10/11 26/06/12 270 34
170 shwe pont 28/01/12 16/10/12 263 5
171 Moe Z 23/08/11 08/05/12 260 32
172 ကိုကြီးမိုင်း 18/05/14 30/01/15 258 7
173 သူကလေး 03/04/13 11/12/13 253 37
174 ရေမြေ့သနင်း 19/06/14 16/02/15 243 105
175 Aye Lwin Oo 25/09/13 17/05/14 235 3
176 Aungnainglin 23/05/12 08/01/13 231 26
177 Diamond Key 29/09/11 08/05/12 223 64
178 maung khinmin 20/06/12 17/01/13 212 85
179 Kyaw Nyo Thway 08/02/13 02/09/13 207 6
180 Lady Finger 10/12/14 04/07/15 207 5
181 aungnng 03/08/11 17/02/12 199 7
182 May Flower 26/04/12 26/10/12 184 61
183 စာကြမ်းပိုး 19/06/14 02/12/14 167 11
184 Zaw Aung 27/05/14 02/11/14 160 48
185 Niki ta 16/02/13 23/07/13 158 4
186 Snow Smile 28/02/14 28/06/14 121 6
187 Myat Pearl Phyu 13/02/14 23/05/14 100 4
188 Blue Rose 24/02/12 30/05/12 97 4
189 နောင်ရိုး 18/06/14 13/09/14 88 9
190 လရိပ် 25/11/14 19/02/15 87 7
191 မစုဥာဏ် 03/10/14 26/12/14 85 7
192 Big Defender 08/06/11 14/08/11 68 13
193 Chatsu 15/11/11 21/01/12 68 34
194 လင်း 27/05/14 27/07/14 62 3
195 Kaung Kg 16/02/12 16/04/12 61 5
196 စီတုန်း 14/09/12 10/11/12 58 19
197 U Pyaung Gye 21/07/14 16/09/14 58 10
198 Antimoe 21/02/11 18/04/11 57 3
199 Mahar Myanmar 10/09/13 31/10/13 52 16
200 အလင်းချို 05/05/15 05/06/15 32 5
201 Computer 23/02/12 14/03/12 21 8
202 မ တတ်ပါ့ 21/09/14 10/10/14 20 4
203 franksoolar 09/02/12 25/02/12 17 5
204 U Kyein 19/09/13 02/10/13 14 8
205 Nyo Win 07/07/14 10/07/1442
206 Maung Thu 07/07/14 09/07/1433
207 ထော်လေး 06/12/13 06/12/13 1 2
208 စာချစ်သူ 03/06/15 03/06/15 1 1
Aye KK ကမှားနေတာထင်တာပဲ..
Back ဂီယာမထိုးမိပါဘူးလို့ ကတိပေးပါ…
အန်ထရီ ဘိုင် ရီးရားး ထင်ပါ့။
ပိုစ့်အရေအတွက်နည်းပေမယ့် အရမ်းကောင်းသူတွေ အများကြီးရှိတယ်။
ပိုစ့်များပြီး ကြိုက်တာတွေထဲက ပြောရရင်တော့ မလတ်နဲ့ ခိုင်ဇာ။
.ကွန်ပြူတာတတ်ခါစ…အင်တာနက်ဆိုတာလည်းသုံးတတ်ခါစပေါ့..ဒါကြောင့် .ကွန်မန့်လည်းမပေးတတ်…စာရေးဖို့တော့ဝေလာဝေးပေါ့ :))
ကွကိုယ်ပြောချင်တာ ပြော လုပ်ချင်တာလုပ်တဲ့
ယုံမလားးတော့ မသိဘူးး အရီးးရေ
-အနော် စာရေး တော်တော်ပျင်းပါသီ..
ကိုပေါက် (မန္တလေး)	28/01/09
ကပေါက်ကြီး ပြန်ပြင်ပေးပါ့မယ်နော်။ ကျေးဇူးပါ။
တော်တော် အချိန်ပေး ပြီး လုပ်ထားတာမို့ ရွာလေးပေါ်ထားတဲ့ အရီးလတ် ရဲ့ စေတနာနဲ့ သံယောဇဉ်ကိုလဲ မှတ်တမ်းတင်ရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
ဒီအထဲမှာ ရွာထဲကို မ၀င်ဖြစ်တော့တဲ့သူတွေလည်း တွေ့ရပါလား။ ကျွန်တော်လည်း ဒီနှစ်ပိုင်းမှ နေ့တိုင်း ဝင်ဖြစ်လာတာရယ်ပါ။ သံယောဇဉ်မပြတ်ဘူးပေါ့။
2011 နဲ့ 2012 မှာ ရွာထဲ လူ ဝင်များခဲ့တာပါ။
မာမွတ်ခိုမ်ကဒေါ့ ဝံဖက်သူ တလ သိန်းချီဆိုဘဲ.. ဖွတ်ပါတီလို အဖွဲ့ဝံစာရင်းလို ဖြစ်နေမှား..
ဒီပိုစ့်ကိုလည်း Save ထားလိုက်ပြီ…
အခုမှပဲ ပြန်မှတ်မိတော့ တယ် အရီး။
Really … 1 in 7
စာရင်းပြ ကိန်းဂဏန်း များ နဲ့ ပျော်ရွှင်နေသူ က သူကြီးမင်း တစ်ယောက်ထဲလား မှတ်တာ။
အဲဒီသူတို့.. ဖေ့စ်ဘုတ်ရုံးချုပ်လိပ်စာက.. 1 Hacker Way တဲ့..
Thanks … I didn’t know it before.
Oracle က Sun Microsystems ကို 2009 မှာ ဝယ်ခဲ့တာပါ။
တလောကလုံး စမတ်ဖုန်းပွတ်တဲ့ခေတ်မှာ J2ME တေ၀ါးတာ မသိချင်ထောင်ထောင်နေသလားဟင်င်င်င်???
မြန်မာပြည်ရဲ့. ပုဂံဆိုက်ဘာတက်စလုပ်တဲ့အချိန်လောက်မှာ.. ကျုပ်က.. yadanar.com နဲ့ဖိုရမ်ကို မြန်မာစာနဲ့လုပ်ထားခဲ့ဖူးသဗျ..။ အမှတ်မမှားရင်.. မြန်မာတွေထဲ.. အစောဆုံးပဲ..။
comment နဲ့ ယူရင် ပို တိကျနိုင်တယ် အရီးရေ့
ရွာထဲ မှာ comment တောင် မှ တစ်ခါတစ်ခါ အရေးပေါ်ရင် Account ပွါးပြောတတ်တာ သိသား နဲ့ ဖိုးသိကြား လေး ရဲ့။ :-)))
အနော်လည်း မအက်တစ် တစ်လှည့် အက်တစ် တစ်လှည့် ဆိုတော့ အခု ဖဘသုံးတာလေးလျှော့ပြီး ရွာပြန်ဝင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်ချင့်…
သဂျီးကစလို့ ပူတူတူလေးအထိ နီတို့အားလုံး မြွေတွတ်…
ဒါကြောင့် နီ လဲ မောင်ကြွပ် ဖြစ်နေတာ။
ဖိုရမ် လောက ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်လောက်တတည်း က ၀င်ခဲ့တာ ဗျ။
ပို့(စ) တင်တဲ့ နှစ်လေးကို ကြည့်လေ။
နဲနဲလေးတော့လွဲနေသလားလို့ post ကစုစုပေါင်း ၃၉ ခုရှိပြီ ဒီထဲမှာ ၂၀ ခုပဲတဲ့
အဲဗျာ . . . ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘယ်ရက်က ဂဇက်မင်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အခုမှပဲ သိရတော့တယ် . . . နံပါတ် ၄၁ ဆိုတော့ တော်တော် စီနီယာကျတာပဲ . . . ငါကွ . . . ဟေ ဟေးးးး
..13/05/12 ..ဆိုပေမယ့် ..ကျော်က.တကယ်က ၂၀၁၀ လောက်ကတဲက ၀င်ဖတ်ဖြစ်နေတာထင်ပါရဲ့… အဲ့တုန်းကမန်ဘာဝင်ဖို့..ကော်မန့်ဝင်ရေးဖို့ကိုတောင် တွန့်ဆုတ်မိအောင် ….ရွာကအရှိန်အ၀ါကြီးခဲ့တယ်… တချို့ကော်မန့်တွေက ပို့စ့်ထက်ကို မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အပြင် …ရွာသူ ။သားတွေအနေနဲ့​အပြန်အလှန်ရိုသေမှုနဲ့​… သိပ်ကိုလူ့ယဉ်ကျေးပီသခဲ့ကျတာ… ခုတော့အမြင်ပြောပါတယ် ..နည်းနည်းလျော့လာသလိုပဲ…